Maxamuud Dayib oo ka hadlay xariggii Itoobiya loogu geystey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Mohamud Dayib oo shir-jaraa'id ku qabtay xarunta xisbiga Doogga ee Göteborg. Sawirle: Björn Olsson/Scanpix
Maxamuud Dayib oo ka hadlay xariggii Itoobiya loogu geystey
La daabacay onsdag 31 juli 2013 kl 16.02
Siyaasiga reer Göteborg Maxamuud Dayib ayaa maanta ka sheekeeyey waxyaalihii ku qabsaday Itoobiya.
Waxay ahayd dhowaan markii lagu qabtay gobolka qalalaasugu ka taagan yahay ee Ogaandeenya oo jirdilka loogu geystey. Halkaas oo ay isaga iyo qoyskiisu ku joogeen booqasho fasax.
In kastoo qalalaasaha gobolkaas ka jira awgiis horey loogu xiray weriyayaasha Martin Schibbye iyo Johan Persson ayuu haddana Maxamuud Dayib aamminey in aysan wax khatar ka imaan karin booqasho caadi ah oo uu halkaas ku tago. Laakiin markii ay dhawr maalmood isaga iyo qoyskiisu halkaas joogeen, ayey maalin maalmaha ka mid ah albaabka ku soo garaaceen askar lebbisan oo ay halkaas ka wateen. Waxayna la aadeen dhinaca miyiga, halkaas oo ay ugu geysteen jirdil isugu jira feer iyo harraati. Waxay kaloo igu la cayaareen sidii in ay i tooganayaan:
- Markaana far saacadood baabuurkii ku soconey ayey baabuurkii istaajiyeen. Kadibna intey baabuurkii igala soo degeen oo indhaha iga xireen ayey igu bilaabeen feer iyo harraati. Waxay kaloo igu la cayaareen sidii in ay i tooganayaan. Waxay igu sameeyeen waxay ahayd wax laga argagaxo.
Muddo kadin waa la iska siidaayey Maxamuud Dayib, wuxuuna u safray magaalada-madaxda Addis Abbeba, halkaas oo uu dabadeed Iswiidhen uga soo kicitimay. Wuxuu kaloo sheegay in uusan ilaa maanta aqoon sababta loo qabtay iyo sababta loo soo daayey, laakiin wuxuu u maleynayaa in xiritaankiisu la xiriiro su’aalo kulul oo uu weyddiiyey qof madax ka ah maamul hoose.
Isha: P4 Göteborg